ဝက်သားကို ဘယ်လောက် ကြိုက်ကြိုက် လုံးဝ မစားသင့်တဲ့ အစိတ်အပိုင်း (၅) ခု
“အသီးမှာ သရက်၊ အသားမှာ ဝက်၊ အရွက်မှာ လက်ဖက်” ဆိုရိုးစကားအတိုင်း ဝက်သားဟာ လူးတွေ နေ့စဉ်စားသုံးကြတဲ့ အသားတွေထဲမှာ အရသာရှိတဲ့ ထိပ်တန်းအသားတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝက်သားရဲ့ အစိတ်အပိုင်း (၅) ခုကတော့ လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာမို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ရှောင်ကျဉ်ကြဖို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ဝက်ဟာ ခေါင်းဖျားကနေ အမြီးထိ အားလုံးစားလို့ရပေမယ့် မစားသင့်ပဲ ချန်လှပ် (သို့) သတိထားပြီး စားရမယ့် အစိတ်အပိုင်း […]
ဒီ၂ဝဝ ကျပ်ကို သေသေချာချာ သိမ်းထားတာ ၆ နှစ်ကျော်ပါပြီ…
တန်ဖိုးကြီး ၂ဝဝ ကျပ် ဒီ၂ဝဝ ကျပ်ကို သေသေချာချာ သိမ်းထားတာ ၆ နှစ်ကျော်ပါပြီ။ ကျွန်တော် အရမ်းပျင်းရိတဲ့အခါ၊ အဆင်မပြေမှု၊ အခက်ခဲတွေကြုံတဲ့ အခါမှာလည်း ဒီ 200 ကျပ်ကို ကြည့်လိုက်ရင် ခွန်အားတွေ ပြန်ပြည့်လာတယ်လို့ အမြဲခံစားရပါတယ်။ ဒီ 200ကျပ်ကို တန်ခိုးရှိတဲ့ ဆရာ၊ ဘုန်းကြီးတွေ ပေးထားလို့ သိမ်းထားခြင်းလည်း မဟုတ်သလို ကျွန်တော်က အယူသီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ သိမ်းထားခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့6[…]
ဆားကြမ်းနင်းပြီး အကျိုး ၉ မျိုးခံစားမယ် (ကျွန်မကတော့ ထိပ်ပြောင်မှာအရမ်းကြောက်တယ်)
ဆားကြမ်းနင်းပြီး အကျိုး ၉ မျိုးခံစားမယ် (ကျွန်မကတော့ ထိပ်ပြောင်မှာအရမ်းကြောက်တယ်) ကျမ ကတော့ ကျန်းမာမယ်ဆို လှပမယ်ဆို အထူးဂရုပြုလေ့ရှိပါတယ်…..။ ကျမ ဆံပင် ထိပ်ပြောင်မှာ အရမ်းကြောက်တယ် အဲ့ဒါလေးကတော့ ဆားကြမ်းလေးနင်းတာပါပဲ…ဆားကြမ်း ၂ ပိဿာ ၈၀၀ ကျပ်ဖိုးဆိုတစ်လလောက် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်…. နေ့ စဉ် အ ချိန် မှန် ရေချိုး ခါနီး တိုင်းဆားနင်းရင် ကိုယ်တွင်းအောင်းပူတွေ ထွက်စေသည်။ ညဘက် နင်းပုံနင်းနည်းကတော့ …မနင်းခင် […]
အပျိုလေးတွေ အိမ်ထောင်သည်ယောက်ျားတွေကို လူပျိုတွေထက် ပိုစွဲလန်းစေတဲ့ ဒီ(၅)ချက်
အပျိုလေးတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောင်္ကျားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့အေကြာင်းရင်း (၅) ချက် ခုနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ တော်တော်များများမှာ အပျိုလေးတွေက ဗီလိန်ဖြစ်နေတာကို အားလုံးလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ဘာကြောင့် အပျိုတစ်ယောက်က ရုပ်ရည်လည်းရှိရက်သားနဲ့…. ပညာအရည်အချင်းလေးလည်း ရှိရဲ့သားနဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောကျ်ားကိုမှ သိက္ခာအကျခံပြီး တွဲနေရလဲဆိုတာ အားလုံးသိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ ယောကျ်ားမှန်းသိနေလို့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ယောကျ်ားတစ်ယောက် ဖောက်ပြန်ချင်စိတ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ အလိုလိုသိကြပါတယ်။သူတို့ဖက်ကချစ်နေရင်တောင် ဒီတစ်ယောကျ်ားတစ်ယောက်က ဖောက်ပြန်မယ့်သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ရှေ့ဆက်တိုးလေ့ မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ […]
ရည်စားဟောင်းက မင်္ဂလာပွဲသို့လာပြီး အသဲကွဲသီချင်းကို ဒူးထောက်ကာသီဆိုနေလို့ ဒေါသဖြစ်ကာ မင်္ဂလာပွဲမှထွက်သွားခဲ့သည့် သတိုးသမီး
ရည်စားဟောင်းက မင်္ဂလာပွဲသို့လာပြီး အသဲကွဲသီချင်းကို ဒူးထောက်ကာသီဆိုနေလို့ ဒေါသဖြစ်ကာ မင်္ဂလာပွဲမှထွက်သွားခဲ့သည့် သတိုးသမီး မင်္ဂလာပွဲကျင်းပနေသောအချိန်လေးသည် ချစ်သူစုံတွဲနှစ်ဦးတို့၏ အချစ်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တတ်နိုင်ရန် ကြည်နူးမှုလေးဖြင့် ပျော်ရွင်နေရသည့်အချိန်ဖြစ်ပေသည်။ ထို့အပြင် မင်္ဂလာပွဲလေးသို့ မိမိခင်မင်နှစ်သက်သူများကို ဖိတ်ကြားကာ ပျော်ရွင်ဖွယ်မင်္ဂလာပွဲလေးကို ကျင်းပတတ်ကြပေသည်။ ယခုတွင်လည်း ကောင်မလေးတစ်ဦးဟာ သူမ၏ မင်္ဂလာဆောင်သို့ ရည်စားဟောင်းကိုလည်း ဖိန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါရည်းစားဟောင်းဟာ မင်္ဂလာပွဲသို့လာရောက်သည့်အပြင် အသည်းကွဲသီချင်းဖြင့် ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ မင်္ဂလာပွဲတွင် အသည်းကွဲသီးချင်းကို ဆိုနေခဲ့သည့်အပြင် ဒူးထောက်ကာ သီဆိုနေခဲ့ပြီး သီချင်းစာသားများကြောင့် […]
ဈေးဝယ်တွေကိုစောင့်ရင်း ပင်ပန်းလို့ အိပ်မောကျသွားခဲ့တဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည်ကလေးငယ်
အချို့သောကလေးငယ်တွေဟာ အိမ်ခြေယာမဲ့တွေမို့ ကိုယ့်ကိုကြိုးစားရှာဖွေပြီး ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေကြရတာပါ ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း လမ်းဘေးဈေးသည်ကလေးငယ်ရဲ့ အိပ်မောကျနေတဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ social media ပေါ်မှာ အတော်လေးကို ရေပန်းစားသွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်ကို မမြင်ရက်လို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အနုပညာရှင် Sharon Cuneta က သူမရဲ့ Instagram ကနေ ကလေးငယ်ရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုပြန်လည်ဝေမျှခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင်ကလေးငယ်ရဲ့ နေရပ်လိပ်စာကိုတွေ့ရင် သူမကိုဆက်သွယ်ပေးဖို့နဲ့ ကလေးငယ်ကိုကူညီချင်လို့ ကလေးငယ်ရောင်းတဲ့ သီးနှံတွေကို အကုန်ဝယ်ယူပြီး […]
အနက္ေရာင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့သူေတြရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား
လူတစ်ယောက်ကို အကြိုက်တစ်ခုစီပါပဲ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အမြင်မတူသလိုအကြိုက်လည်းမတူကြပါဘူး။ အနက်ရောင် ဝတ်ဆင်သူတွေက ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိကြတယ် ပိုအောင်မြင်ကြတယ်လို့ လေ့လာချက်တွေက ဆိုထားပါတယ် သင့်ရဲ့ Favorite Colorကအနက်ရောင်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကသင့်အတွက်ပါ။ အနက်ရောင်ကြိုက်တဲ့သင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကတော့- ၁။ သင်ကအမှီအခိုကင်းပါတယ်။ဘယ်သူကိုမှအားမကိုးတတ်ပါဘူး။ ဖြစ်သမျှအခြေအနေတိုင်းကိုတစ်ယောက်တည်းထိန်းချုပ်တတ်ပါတယ်။ ၂။ အရာရာကို အလေးအနက်ထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးရိုးဆန်ပြီးသိုသိုသိပ်သိပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ၃။ ခံစားချက်မရှိတဲ့ မျက်နှာထားမျိုးနဲ့ နေတတ်ပါတယ်။တစ်ခါတလေလောကကြီးကိုအရွဲ့တိုက်နေတတ်ပါတယ်။ ၄။ အာရုံနောက်စရာတွေကို ခေါင်းထဲ သိပ်မထည့်တတ်ကြပါဘူး။ အဆိုးမြင်စိတ်တွေဝင်လာတာကိုမုန်းတီးပါတယ်။ ၅။ သင့်အကြောင်းကိုအခြားသူတွေဆီမှာသိပ်မပြောပြတတ်ပါဘူး။ ၆။ သင့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုအနက်ရောင်နဲ့ကာစီးထားတတ်ပါတယ်။ ဥပမာသင်ကစိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ခံစားချက်အတိုင်းအနက်ရောင်အင်္ကျ ီဝတ်ပြီး […]
မျက်နှာပြင်လှပပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေဖို့ အရေးပါဆုံးဟာ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံပါပဲ။ ဒီလို လှပဖို့ရာ နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ ကျန်းမာဖို့ လိုပါတယ်။ ခြောက်ပြီးကွဲအက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမှ လှပနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လှပပြီး ကျန်းမာတဲ့နှုတ်ခမ်းသားများဟာ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး ဆိုးမထားသည့်တိုင်အောင် ပန်းနုရောင်သန်းနေပါလိမ့်မယ်။ နှုတ်ခမ်းသားများ ကျန်းမာနေမှ နှစ်လိုဖွယ် အသွင်အပြင် ရရှိနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ နှုတ်ခမ်းသားခြောက်ခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု ပြုထားရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းသား မခြောက်သွေ့ရအောင် ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ ကာကွယ်ကြရအောင်။ ၁။ နေရောင်ခြည် […]
အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲ wetတစ္ရႈး ထည့္ေလွ်ာ္ၾကည့္ေသာအခါ
အဝတ်လျှော်စက်ထဲ wetတစ်ရှုး ထည့်လျှော်ကြည့်သောအခါ ပျမ်းမျှအားဖြင့် လူတစ်ယောက်ဟာ အဝတ်လျှော်တဲ့အချိန် တစ်ပတ်ကို ၄ နာရီ ရှိပါတယ်။ အဝတ်လျှော်စက်တွေ ပေါ်လာတဲ့အခါ လူတွေအတွက် အလုပ်ရှုပ်သက်သာ သွားစေပါတယ်။ အချိန်ကုန်လည်း သက်သာစေပါတယ်။ အဝတ်လျှော်စက်ထဲကို အဝတ်တွေ မထည့်ခင် wetတစ်ရှုးကို အရင်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ အကျိုးကျေးဇူးရလာမလဲ ဆိုတာ ဖော်ပြပေးပါမယ်နော်။ ၁။ အဝတ်မှာ ချည်အစအနတွေ မကပ်စေတော့ပါဘူး။ wetတစ်ရှုးက အဝတ်အစားတွေမှာ ကပ်နေတဲ့ ချည်အစအနတွေ၊ ဆံပင်တွေကို […]
လူသိနည္းေသာ A ေသြးပိုင္ရွင္ေလးမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား
ကမ္ဘာပေါ်မှာ စားရင်တိတိကျကျ ကောက်ခံထားတဲ့ A သွေးပိုင်ရှင်ပေါင်း လူဦးရေဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်း လောက်အထိ ရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ် O သွေးပိုင်ရှင်တွေပြီးရင် လူဦးရေအများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သွေးအုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှင်တွေကတော့ လူတွေရဲ့ သွေးအမျိုးအစားလိုက်၊ ပြုမူနေထိုင်ပုံ အမူအကျင့်နဲ့ အသေးစိတ် ဗီဇဝါသနာတို့မှာ ကွဲပြားသွားပြီး၊ သွေးအုပ်စုတစ်ခုချင်းဆီလိုက်ပြီး ဘယ်လိုပုံစံ ဘယ်လို အနေအထား ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ အခြေခံအားဖြင့် တွက်ချက်လို့ရကြောင်း ဆိုပါတယ်။ အခု ပိုင်ရှင်တွေကတော့ […]